कसरी सुधार्ने पालिका स्वास्थ्य? संरचनात्मक अन्योल र महामारीका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको स्थानीय तहलाई अब भने ढुक्कसँग सुधार गर्ने अवसर छ।
गल्ती कर्मचारीको, दुःख जनतालाई कर्मचारीहरू जसरी हुन्छ सेवाप्रवाहलाई झन्झटिलो बनाउँछन् र त्यसैको आडमा सेवाग्राहीलाई दुहुन्छन्। बिचौलिया सप्रिन्छन्, कर्मचारी त यसै मोटा, उसै मोटा!
कसरी पुर्‍याउने स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच? हाम्रो जस्तो स्रोतको सुझबुझपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा सार्वजनिक क्षेत्रको बलियो उपस्थिति र सेवा प्रवाहको क्षमता विकास नगरेसम्म सबैमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने काम असम्भवप्रायः छ।
कस्तो हुनुपर्छ शहरी स्वास्थ्य सेवा? आम नागरिकले उपचार खर्च धान्नै नसकेर स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था बढिरहँदा सुलभ र सहज रूपमा सेवा पाइने शहरी स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रः नाममा सेवा, व्यवहारमा चरम व्यापार निजी अस्पतालमा चिकित्सकलाई रकम सङ्कलनमा दिइने ‘टार्गेट’, बिरामी प्रेषण गर्ने क्लिनिक सञ्चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्याइने कमिशन, बिरामी ल्याइदिए बापत एम्बुलेन्स चालकलाई दिइने भत्ता र रिक्सावाललाई दिइने ‘गतिलो’ खाजा खर्चसम्मको अप्रत्यक्ष भारी बोक्न बाध्य छन्, नागरिक।
मस्तिष्कघातबाट कसरी बच्ने? धूमपान र मद्यपान गर्ने, अस्वस्थकर खानपान गर्ने, तनाव लिइरहने तथा निष्क्रिय जीवनशैली भएका व्यक्तिमा मस्तिष्कघात हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउन प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान मौसम पूर्वानुमानलाई प्रभावमा आधारित बनाइए सम्भावित विभिन्न प्रकोपमा जनधनको क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ।
प्रतिनिधित्व अनुहारको कि सवालको? आदिवासी जनजातिहरूले अनुहारभन्दा समुदायको सवाल बोक्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्वमा जोड दिनुपर्छ। उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन पहिलेका गाविसका वडा ब्युँताउनुपर्छ।
संविधानको एउटा धारा कार्यान्वयन गराउन पनि कति कुरा ख्याल राख्ने सांसदले? संविधानको एउटै धारा पनि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सांसदले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्?
चिकित्सा पढ्ने विद्यार्थीलाई कसरी जोगाउने तनावबाट? शैक्षिक तथा पारिवारिक दबाब लगायतका कारण हुने मानसिक तनावबाट चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीलाई जोगाउन सके चिकित्सा क्षेत्रसँगै समाजले लाभ लिन सक्छ।
यसरी गरियो नेपालमा बेमौसमी तरकारीको शुरुआत नेपालमा तीन दशकअघि प्रारम्भ गरिएको बेमौसमी तरकारी खेतीले धनकुटाको भेडेटार र सिंधुवाका किसानको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ। अब स्थानीय सरकारले यसको अनुसरण गर्दै देशव्यापी बनाउन जरुरी छ।
गरीबलाई बचाऊ उपचार खर्चकै कारण नागरिकको ठूलो हिस्सालाई बर्सेनि गरीब बनाइरहने, उनीहरूलाई अकालमै मर्न छाडिदिने राज्यसंरक्षित ‘अमानवीय अपराध शृङ्खला’ तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ।
यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति असहिष्णु समाज समाजमा खुल्न नसकेर स्वतन्त्रता खोज्दै डिजिटल दुनियाँमा पुगेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले त्यहाँ पनि हिंसाको सामना गर्नुपरिरहेको छ।
विजयपुरका खनालहरूको नालीबेली विजयपुरमा दन्तकाली मन्दिरको पूजा चलाउने जिम्मेवारी पाएका खनालहरू तनहुँकोटबाट गएका थिए, जो सेनवंशी राजाकै समयमा त्यहाँ पुगेका थिए।
अर्थमन्त्री शर्माले सदनमा नदिएको जवाफ संसद्‌मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जवाफ फितलो मात्र छैन, उनले आफूमाथिको संगीन आरोपको तर्कपूर्ण प्रतिवाद समेत गर्न सकेका छैनन्। खास समूहलाई पोस्न करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागिसकेपछि अर्थमन्त्री शर्माले कुन कुन शीर्षकमा करका दर हेरफेर गर्नुको औचित्य र आवश्यकता किन परेको हो भनेर संसद्लाई जवाफ दिनुपर्छ।
राष्ट्र र राज्य निर्माणका शर्त असल नेतृत्वले नेता जन्माई राष्ट्र निर्माणको अख्तियारी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा हामीकहाँ केवल अनुचर जन्मिरहेछन् जो विवेक र निष्ठा बिर्सिएर अवसरवादमा लिप्त हुन्छन्।
किन रोक्नु हुँदैन सरकारी सेवामा क्षमतावान् भित्र्याउने 'छड्के प्रवेश'? निजामती सेवामा उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने प्रवेशमा रोक लगाइए प्रतिभावान् व्यक्ति भित्र्याएर सार्वजनिक प्रशासन सक्षम र सुदृढ बनाउने झिनो सम्भावना पनि अन्त्य हुनेछ।